३५ अर्ब रुपैयाँ हेलमेटमा खर्च !! (भिडियो रिपोर्ट ) - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/३५ अर्ब रुपैयाँ हेलमेटमा खर्च !! (भिडियो रिपोर्ट )
३५ अर्ब रुपैयाँ हेलमेटमा खर्च !! (भिडियो रिपोर्ट )
केही समयअघि मोटरसाइकलमा सेवा दिने टुटल र पठाओलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टुटल र पठाओलाई कारबाही नगर्न भने । त्यहाँ एउटा कम्पनीमा १२ हजार भन्दा बढी मोटरसाइकलमा रोजगारी पाइरहेका युवाहरु छन् । यो देशको स्थायी सरकार कर्मचारी, यिनै बर्दीधारीले गर्ने एउटा निर्णयले सरकारको कस्तोसँग साख गिर्छ ? हिजो ज्ञानेन्द्र शाहका बेला लगाइएको नियम सडकमा सैनिक हुँदा त लागू भएन भने अहिले जनताको सरकारमा के सोचेर यस्तो निर्णय लागू गरियो । २५ करोड रुपैयाँले एक मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने देशमा हेलमेटमा मात्रै ३५ अर्ब रुपैयाँ सकाउने ? देशमा एउटा हेलमेट उद्योग होस्, सरकारले चलाओस् तब यस्ता नियम लागु गर्दा जनता, वाह सरकार भन्छन् । यहाँ त फगत विदेशी कम्पनीलाई पोस्न, नेपाली जनतालाई सोस्न अनि कमिसनको माहमा फस्न गरिएका यस्ता निर्णयले कसैको हित गर्छ जस्तो लाग्दैन । जुन देशको सडकमा कुलो, खाल्डो, पशुचौपाया, पसल हुन्छ, त्यहाँ हेलमेट लगाएका भरमा ज्यान जोगिन्छ ? मादक पदार्थसेवन अर्थात् मापसे, सिट बेल्ट अर्थात् सिबे आतंकपछि ट्राफिक प्रहरी हेलमेट आतंक मच्चाउँदैछ । जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम बाइलाइनको शृंखला हेर्नुहोस्ः
रविन नेपाल र सुशान्त पोखरेलको ‘’आउ मिली नाचिदेउन’’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
डाक्टर ओम मूर्तिका अनुसार धेरै रिसाउने व्यक्तिलाई हृदयघातको खतरा !!
मध्य रातमा यौन दुर्व्यवहार गर्ने को थियो त ? पहिलो पटक मुख खोलीन ज्योति मगरले हेर्नुहोस (भिडियो सहित )
रि*हापछी रबि पहिलो पटक कार्यक्रममा बोल्दै भने ‘आवाज विहीनहरुका लागि हाम्रो कार्यक्रमको ढोका सदाझैँ खुल्ला छ’